El mal de Corcira: isavenge sokugqibela seBevilacqua kunye neChamorro saga | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | 30/07/2021 02:25 | I-Biography, Ababhali, Inoveli emnyama
Ibiza, enye yeendawo ze-El mal de Corcira
Ububi beCorcira yinoveli ngumbhali odumileyo waseSpain uLornzo Silva. Ikhutshwe ngoJuni 2020, sisavenge samva nje kuthotho oludumileyo Bevilacqua kunye neChamorro. Kwakhona, kwaye njengesiqhelo, umbhali uphinde apapashe emva kweminyaka emibini isahluko esitsha kolu ngcelele olwaqala ngo-1998.
USilva uvumile ukuba uhlala efuna ukubalisa eli bali, elityala athe ekugqibeleni walihlawula kunye nabafundi bakhe. Emva kokupapasha umsebenzi wakhe, wathi: “Iziphumo zezona zinkulu kakhulu kwaye mhlawumbi ezona zinto zinzima ukuhambisa kuthotho”. Kule nto, ukongeza ekusombululeni ulwaphulo-mthetho, sinokufunda okungakumbi malunga nolutsha lwe-protagonist kunye namava akhe njengearhente yabanqolobi.
1 Isishwankathelo sika-El mal de Corcira
1.1 Ityala elitsha
1.2 Iimpawu zokuqala
1.3 Amabali afanayo
2 Uhlalutyo lukaEl mal de Corcira
2.1 Iinkcukacha ezisisiseko zomsebenzi
2.2.1 URubén Bevilacqua (Vila)
2.2.2 UIgor López Etxebarri
2.2.3 Abanye abalinganiswa
2.3 Iminqweno ye-El mal de Corcira
2.3.1 Ukulungiselela umbhali
3 Izimvo malunga no-El mal de Corcira
4 Malunga nombhali, uLornzo Silva
Isishwankathelo se Ububi beCorcira
Iiarhente URubén Bevilacqua -Vila- kunye noVirginia Chamorro, bazifumana emva kokubanjwa kwezinye izaphuli-mthetho. Ngobo busuku, i-brigadista yenzakele kwaye ithunyelwe esibhedlele. Ngelixa achacha, uVila ufumana umnxeba osuka kuLieutenant General Pereira, owamnika ityala elitsha. Elunxwemeni eFormentera, kwavela indoda efileyo, ihlutywe iimpahla zayo yalimala ngenkohlakalo.
Emva kodliwanondlebe namangqina amaninzi kuloo ndawo, Ekuqaleni ndigqibe kwelokuba inokuba lulwaphulo-mthetho olunomdla. Kungenxa yokuba abaninzi bathi balibonile ixhoba bekunye nabanye abantu abancinci kwiindawo ezinobungane eIbiza. Kwakhona, wayelungiselele ukudibana nendoda ngobo busuku elunxwemeni. Kodwa, yonke le ngqikelelo iyatshintsha xa bekwazi ukufumanisa ukuba ngubani ongasekhoyo.
Ungu-Basque Igor López Etxebarri, owayesakuba lilungu leqela le-ETA, owachitha ixesha elide ejele eMadrid. Ngenxa yale mvelaphi, Umyalelo ophezulu unika uVila uphando lokubulala. Ukwenza oku, kufuneka ahambe aye eGuipúzcoa, iphondo apho uLópez Etxebarri ahlala khona rhoqo, indawo eyaziwa li-lieutenant yesibini ngokugqibeleleyo amashumi eminyaka.
Ububi beCorcira: 1503 ...
Ngexesha lophando, uhamba ngezahluko ezininzi zobomi -Umntu kunye nomsebenzi-- umfi, ngenjongo yokucacisa ngokubulala. Ngelo xesha, uVila ukhumbula Ukuqala kwayo kwizisele zase-Intxaurrondo, xa wayesilwa nobunqolobi. Iarhente ithatha uhambo ukubuya ngexesha ngokukhumbula konke ukuzilungiselela okufumene imisebenzi kunye nalawo maxesha anzima asebenzayo.
Yile ndlela eliqhubeka ngayo ibali, phakathi kwamava adlulileyo kunye namaxesha akhoyo ophambili angoyikiyo. Kuchazwe iziza ezininzi, phakathi kwabo, Amaxesha anzima eSpain ngenxa yokuhlaselwa kwe-ETA, kwaye uVila, eneminyaka engama-26 kuphela ubudala, wakwazi ukujongana nabo ngokuqatha. Ngelo xesha, i-brigadista isombulula imeko eyimfihlakalo eyabelwe yona.
Uhlalutyo Ububi beCorcira
Iinkcukacha ezisisiseko zomsebenzi
Ububi beCorcira yinoveli enamaphepha angama-540, yahlulwe yangamacandelo Izahluko 30 kunye epilogue. Iyelenqe lenzeka kwiindawo ezimbini: okokuqala kwisiqithi saseSpain iFormentera de Ibiza, emva koko siya eGuipúzcoa. Ibali lixelwa kumntu wokuqala ngumntu ophambili, eneenkcazo ezineenkcukacha nezichanekileyo.
URubén Bevilacqua (Vila)
Ungumlinganiswa ophambili kuthotho, Indoda eneminyaka engama-54 ubudala enesidanga kwizifundo zengqondo, ngubani Usebenza njenge-lieutenant yesibini kwi-Civil Guard. UkwiCandelo eliSebenzayo eliseMbindini, iqela elikhethekileyo lokusombulula ulwaphulo-mthetho. Unengqiqo, ujonge kwaye uyasebenza ngokungagungqiyo, ongaziphosiyo iinkcukacha.
UIgor López Etxebarri
Ulixhoba lecala elinikezwe iVila, le ndoda ivela kwilizwe laseBasque kwaye Wayengumlingani weqela le-ETA. Ngenxa yezenzo zakhe, wavalelwa iminyaka eli-10 kwintolongo yaseFrancia naseAlcalá Meco eMadrid. Ngenxa yokwaliwa koogxa bakhe, wazifihla imeko yakhe yesini kangangeminyaka emininzi.
Kweli nqanaba, uVila uza kuba no-Álamo njengeqabane lakhe-iarhente ecekisekayo nengakhathaliyo-, kuba iqabane lakhe lamapolisa liphumle. Nangona iChamorro ingazukusebenza ngokupheleleyo, uVila uya kuhlala enxibelelana naye ngomnxeba. Olunye uthatho-nxaxheba olubalaseleyo lolukaBrigadista Ruano, ingcali egqwesileyo kunye nobuchule obuninzi bokuyila.
Ukukhangela Ububi beCorcira
USilva wayeneli bali engqondweni njengoko okoko i-saga yaqala nge-90s.. Ngesi sizathu, waqhuba uphando olunzima kubunqolobi amashumi eminyaka. Lo ngumcimbi onzima ukujongana nawo, kuba iqela labanqolobi i-ETA lenze umonakalo omkhulu kubemi nakubantu abangoogada. Emva kokuba iqela lichithwe, umbhali ukwazile ukuqokelela ubungqina kwiiarhente nakubantu abaqhelekileyo abasindayo ngelo xesha.
Ngo dliwano ndlebe XL ngeveki, USilva wachaza: Kude kube woyisiwe i-ETA, uMkhosi Woluntu awuzange usikhulule isibhambathiso. Akunjalo nam. Kwaye ngoku bandixelele yonke into ngesisa esikhulu ”. Umbhali unikezele ngezahluko ezilishumi zencwadi kwesi sihloko sinobuzaza, esebenzisa amava earhente uBevilacqua, umlo wakhe wamapolisa anxamnye nabanqolobi kunye noloyiso lwakhe.
Izimvo zivuliwe Ububi beCorcira
Ukusukela oko yasungulwa ngo-2020, Ububi beCorcira yamkelwe kakuhle ngabafundi, ababelinde ngolangazelelo olunye uhambo oluvela kwiiarhente iBevilacqua naseChamorra. Kwiwebhu ime ngaphandle kokwamkelwa okungaphezulu kwama-77%, kunye namakhulu eembono ezilungileyo. Eqongeni Amazon Inamanqaku ali-1.591, apho ama-53% ayinika iinkwenkwezi ezi-5 ze i-9% yalinika ama-3 okanye ngaphantsi.
Malunga nombhali, uLornzo Silva
U-Lorenzo Manuel Silva Amador Wazalwa ngolwesiBini, nge-7 kaJuni ngo-1966 kwigumbi lokubelekisa laseGómez Ulla esibhedlele samajoni, esikwisixeko saseMadrid (phakathi kwesithili saseLatina neCarabanchel). Kwiminyaka yakhe yokuqala, wayehlala eCuatro Vientos, kufutshane nedolophu yakowabo. Emva kwexesha, wayehlala kwezinye iidolophu zaseMadrid, ezinjengeGetafe.
Waphumelela njengegqwetha kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid kwaye usebenze iminyaka eli-10 (1992-2002) kwiqela lezorhwebo laseSpain Umanyano Fenosa. Ngo-1980 waqala ukudlala ngoncwadi, wabhala amabali aliqela, izincoko, iincwadi zemibongo, phakathi kwezinye. Ngo-1995, wazisa inoveli yakhe yokuqala: NgoNovemba ngaphandle kwee-violets, yalandelwa emva konyaka ngu Into yangaphakathi (1996).
Ngo-1997 i I-Nostalgia trilogy no: Ubuthathaka beBolshevik, Ibali elalitshintshelwa kumdlalo bhanyabhanya ngo-2003 ngesikripthi sombhali kunye noManuel Martin Cuenca. Ngo-2000 wazisa omnye wemisebenzi yakhe ebalaseleyo: Ischemist engenamonde, isavenge sesibini solu chungechunge Bevilacqua kunye neChamorro. Le noveli yafumana ibhaso likaNadal kwakuloo nyaka.
2012, esidlangalaleni Uphawu lweMeridian -saga I-Bevilacqua kunye ne-Chamorro—, Ingxelo ephumelele imbasa yePlaneta (2012). Olu luhlu luphumeleleyo sele luneencwadi ezilishumi, eyokugqibela kuzo Ububi beCorcira (Ngo-2020). Ngaloo nto, umbhali wakhe ikhono elinamandla lomsebenzi wokubhala, eneenoveli ezingaphezu kwama-30 eziguqulelwe kwiilwimi ezilishumi elinambini, nalapho ifikelele kwizigidi zabafundi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli emnyama » Ububi beCorcira
EyeThupha. Ukukhethwa kweendaba zokuhlela